Ihe Dị Mkpa Ịmata banyere CCNP Nkọwapụta Mmekọrịta - ITS
Ihe Dị Mkpa Ịmata banyere CCNP Ọrụ Mmekọrịta
Ihe Nkwekọrịta CCNP
Ọrụ Oportunity na IT
Nyocha CCNP Nyocha Atumatu-
Ngbagha nke CCNP nhazi nkwado
Ihe Nchoputa CCNP:Mkpa ndị ọkachamara na-atụgharị uche na ịba ụba nke ndị ọkachamara na-alụ ọgụ maka ụdị ọrụ dị iche iche yiri nke a ewetawo osisi na-egosi ihe ọhụrụ. Nke a bụ ihe kachasị mkpa na ụlọ ọrụ IT ebe ọnọdụ ahụ dị nnọọ njọ, n'ihi ọganihu na-aga n'ihu n'ihu nke azụmahịa ahụ niile. Otu ga-agbanye ikpe ziri ezi mgbe ị na-ahọrọ ịhazi ikike ha na mkpebi siri ike nke akwụkwọ nkwado na ọmụmụ ihe kwesịrị ịdabere na ya dị ka ọ dị.
Akwụkwọ ikikere kachasị amara na azụmahịa IT bụ Cisco Certifications ha nwekwa ihe eji eme ihe iji kwado mmadu. Ihe pyramid ha na-enwe mgbe ha nwere ọkwa dị na isi ahụ, nke na-arụ ọrụ site na Njikọ mmekọ, n'oge ahụ Ọkwa ọrụ, ọzọ bụ ọkwa Ọkachamara na n'elu bụ ọkwa nke ndị nchịkwa. E wezụga usoro ọkwa nke ọ bụla, e nwere ihe ndekọ itoolu na nkwenye dị iche iche aghaghị ịmụta ma kpochapụ ọkwa ọ bụla. Asambodo na mmeghari njem ha bu-
Ntugharị ma gbanwee
Kwa ọkwa nke pyramid nwere òkè ya igwu egwu ma na-agụnye ihe ọhụrụ iji mezuo ihe dị mkpa maka ọkwa profaịlụ dị iche iche. Ịdị elu ị na-aga na ọkwa gị ịmara ihe na-ebuli ma mee ka ọmụmụ ihe mee ka ọrụ gị na netwọk. 'Ọkachamara Ọkachamara' na - eso asambodo -
Ntugharị CCNP na gbanwee
Onye na-enye ọrụ na CCNP
Mmekọrịta CCNP - Ọkwa dị elu
Mmekọrịta CCNP bụ usoro nkwekọrịta a na-arụ ọrụ na ọzụzụ a na-eme, icheta, iji mee ka nghọta gị na ikike ịkwalite 'Ụdị ahịa'. Maka ihe ọ bụla ị na-ahụ maka azụmahịa IT na-arụ ọrụ na mmepe bụ ihe dị oke mkpa na Mmekọrịta CCNP ogwe aka gị nwere ikike a iji wulite ọrụ nke njikọ gị na njikọ gị.
Ịnwere ike ịme asambodo a mgbe njedebe dị mkpa nke nkwenye nkwado CCNA ma ọ bụ nkwenye CCIE ọ bụla. Ndị na-esote bụ ọzụzụ ndị a chọrọ ị ga-enweta
Igosipụta Cisco IP Telephony na Video, Nkebi nke 1
Igosipụta Cisco IP Telephony na Video, Nkebi nke 2
Inyocha Cisco IP Telephony na Video
Igosipụta Cisco Collaboration Applications
Ndị na-esote bụ nyocha ndị ị kwesịrị ikpochapụ-
Ndị na-esonụ bụ isi ihe mmasị nke nyocha ahụ:
Nnyocha - Oge - Ole Ajụjụ
300-070 CIPTV1 - 75 nkeji - 55-65
300-075 CIPTV2 - 75 nkeji - 50-60
300-080 CTCOLLAB - 75 nkeji - 55-65
300-085 CAPPS - 75 nkeji - 55-65
Ndị mmadụ bụ ndị 18years ma ọ bụ n'elu bụ ndị ruru eru maka nyocha.
Ihe nyocha nke nyocha gosipụtara ebe nchekwa na foto kọmputa na akara dị elu, n'otu aka ahụ, abụọ ntinye akara foto nke ọchịchị. (Na-enweghị ihe na-erughị otu na-eziga akara).
Ndị na - ebi na mba ndị dị ka - Cuba, Iran, Syria, North Korea na Sudan anaghị etinye aka na nyocha a.
A na-agụnye ọnụ ọgụgụ na ibe weebụ ma gụọ ya n'ihi na ị na-aṅa ntị na-agafe ma ọ bụ ịgbagha.
Ọ dị mkpa ka ị nọdụ ala maka oge ezumike ise iji weghachite ule ahụ.
Mgbe nyochachara nke ọma, a na-enye akụkọ nyocha nke edere na foto kọmputa nke olileanya ahụ.
Ị nwere ike ịchọta ọdịnihu, ọnọdụ na isi ihe mmasị nke asambodo na - Cisco Certifications Tracking System.
Asambodo ahụ ziri ezi ruo ogologo oge, a pụkwara ịmeghachi ya site na ị gafere ọ bụla n'ime usoro ndị a tupu ụbọchị ngwụcha nke nyocha ahụ:
Nyocha 642-XXX / 300-XXX ugbu a Ọfụma nyocha,
Nyocha nke CCIE nke dị ugbu a,
CCDE nke oge a dere / ala n'ụwa Nyocha,
Nke kachasị mkpa bụ ịchọta ịchọta na ọzụzụ site na Cisco Learning Partner like - "Ọ BỤ"Onye na-enye usoro ọmụmụ Cisco ọhụrụ na nke kachasị mma maka ndị ọkachamara n'Ịntanet.
Lee kwa: Akaụntụ CCNA - Nduzi zuru ezu
Nzọụkwụ site Nzọụkwụ Nzọụkwụ ịghọ CCNP Wireless Certified Professional
Ndị ọkachamara na CCNA - Akwụkwọ Ajụjụ Ajụjụ